Serivisy - Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd.
Amin'ny maha singa iray manan-danja an'ny AMP, dia takiana mafy ny fahombiazany tsara. Ny volavolanay dia fitambaran'ny gravity primera sy sivana kitapo faharoa, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana any Shina sy any amin'ireo firenena eropeana. Eo ambanin'ny fepetra miasa mahazatra, ny fifantohana amin'ny emission amin'ny outlet air filter dia mety hahatratra ny standard 20mg / m3 ary tsara kokoa aza.
Mba hiantohana ny fahombiazan'ny sivana, dia mifidy ny kitapo sivana vita amin'ny fitaovana American Dupont Nomex izahay, izay manana fiainana maharitra sy fahombiazan'ny asa tena tsara.
Tao anatin'ny yeas roa farany, nametraka sivana 2 ao Finlandia izahay hanavaozana ilay zavamaniry mifangaro asfalta taloha. Ny vokatray dia afaka mamaly ny fitakiana tontolo iainana eo an-toerana ary mahazo derain'ny mpampiasa tokoa.
Ny vovo-diloilo mafana dia ampiasaina amin'ny fanafanana tanky bitumen miaraka amin'ny menaka mafana, izay mihodina ao amin'ny fantsom-pandrefesana sy ny tanky bitumen. Boiler dia manana tanky fanitarana avo lenta sy tanky fitehirizana ambany, izay miantoka ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny asa avo.
Mikasika ny burner dia niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany avy any Italia, Baitur izahay. Ny karazana solika dia tsy voatery avy amin'ny menaka maivana, menaka mavesatra ary entona voajanahary. Ny ignition sy ny fanitsiana ny afo dia voafehy ho azy.
Ny fahafahan'ny boiler dia 300,000 Kcal / h - 160,000Kcal / h.
Rafitra Additive Granuated
Ny rafitra additive granuated dia mamarana ny lanjan'ny lanjany sy ny fitaterana aditif. Mba hahazoana asphalt avo lenta dia azo ampiana ireo additives, toa ny Viatop, Topcel, amin'ny dingan'ny famokarana asfalta.
Ny additives Granulate dia omena hopper misaraka, voalohany ao anaty silo fitehirizana, ary avy eo amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody sy lolo, ny additives dia hiditra ao amin'ny hopper milanja. Miaraka amin'ny fanampian'ny fanaraha-maso ny solosaina dia apetraka ao anaty mixer ny additives.
Ny zavamaniry Ca-Long dia manana tahiry malaza eran-tany, izay manana fiainana maharitra.
Toy ny mahazatra dia manana tahiry amin'ny karazana fitsinjovana isan-karazany amin'ny filan'ny vonjy maika ho an'ny mpanjifa izahay, amin'izay ny mpanjifanay dia afaka mahazo tahiry haingana araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny làlambe.
Fanavaozana ny programa
Ny tena mampiavaka ny rafitra fanaraha-maso Ca-Long ho an'ny AMP dia ny interface milina malala-tanana, izay derain'ny mpampiasa Ca-Long AMP. Afaka manome serivisy fanavaozana programa ho an'ny AMP misy marika amin'ny kinova Anglisy na Rosiana izahay.
Fanavaozana ny fanamboarana
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny AMP, havaozina ny zava-maniry taloha hahafeno ny fangatahana vaovao sy hitehirizana ny vidin'ny fividianana zavamaniry vaovao. Voalohany, afaka manome izay singa rehetra ao amin'ny AMP hifanaraka amin'ilay zavamaniry taloha izahay. Faharoa, azontsika atao ny manampy ny rafitra RAP amin'ny AMP taloha rehetra mba hitsimbinana ny vidin'ny famokarana. Fahatelo, ny AMP na iza na iza dia azo havaozina amin'ny zavamaniry karazana tontolo iainana hahafeno ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana vaovao.